म को हुँ? भाग 1: सुन्दर तर टूटे — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
बर्न पहिचान बारेमा सोच्नुहोस्. यो मानिस एउटा डुङ्गामा मा wakes र उहाँले छ जो थाहा छैन. उहाँले एक सुराग पाता र स्विट्जरल्याण्ड जान्छ. उहाँले एक लड्न पाउने र त्यो लडाई मा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ बुझ्छ. यदि तपाईं अनियमित बाहिर फेला कि पागल हुन तपाईँलाई गोप्य निन्जा कौशल थियो? उहाँले एउटा यात्रा मा छ चलचित्र बाँकी लागि उहाँले छ जो पत्ता लगाउन. उहाँले पनि थाहा थिएन कुराहरू सक्षम छ. तर यदि त्यो छैन थाह छ, उहाँले साँच्चै जीवन बिताउन सक्षम हुने छैन.
म मान्छु छैन यो कोठा कसैलाई गोप्य निन्जा कौशल छ, तर यो हाम्रो पहिचान सोच्न लागि अझै पनि महत्त्वपूर्ण.
हामी हाम्रो जीवनमा पूरा कसरी हाम्रो पहिचान संग गर्न धेरै छ हामी कसरी बुझ्ने. मेरो मतलब, के तपाईं एक मानवको रूपमा चिन्नुहुन्छ? त्यसको मतलब के हो? तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ किन थाह, के तपाईंको महत्त्व छ, के तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ, के तपाईं मानिन्छ छौं गरिरहेको गर्न? किन तपाईं पनि अवस्थित गर्छन्? तपाईं को हुन्? हामी यी प्रश्नहरूको जवाफ छैन भने हामी हाम्रो जीवन बर्बाद सक्छ, अरू कसैले रूपमा जीवित.
समर्थक खेलाडीहरूलाई घाइते वा रिटायर छ पुग्दा यो लाजमर्दो छ, र त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा बाँकी गुमायो हुनुहुन्छ. तिनीहरूले सोचे सबै यो समय आफ्नो पहिचान एक खेलाडी हुनुको कारण. त्यो अरूलाई तिनीहरूलाई कसरी उपचार छ, र तिनीहरूले अँगालेका के. त्यसैले यदि तिनीहरूले जो छ, तिनीहरूले तिनीहरूको जीवन खन्याउन छौँ के. र अब यसलाई गएका कि तिनीहरूले लागि बाँच्न केही छ.
र त्यहाँ सम्बन्ध गर्न सम्बन्ध बाट जाने जो जवान महिलाहरु छन्, जसले उपस्थिति संग Obsessed बन्न. तिनीहरूले लाग्छ किनभने तिनीहरूको पहिचान गर्ने राम्री केटी हुनुको समेट्न छ मान्छे जस्तै कि. र लोकप्रियता हराउँछ गर्दा, तिनीहरूले चोट हुनुहुन्छ. जहाँ तिनीहरूले आफ्नो उद्देश्य फेला त्यो हो. के तपाईं जो बारेमा भ्रमित हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो साथ गरिरहेको हुनुपर्छ के तपाईं बारेमा भ्रमित हुनेछु जीवन र दुःखद परिणाम हुन सक्छ.
यदि म जो तपाईं सोधे तपाईं के भन्नुहुन्छ? विद्यार्थी वा खेलाडी वा Rapper वा पास्टर? कुनै, ती कुराहरूमा छन्. तपाईं को हुन्?
हामी संसारको हामीलाई परिभाषित गर्न दिन सक्नुहुन्छ. हामी हाम्रा साथी हामीलाई परिभाषित गर्न दिन सक्नुहुन्छ. हामी हाम्रो आमाबाबुले हामीलाई परिभाषित गर्न दिन सक्नुहुन्छ. हामी उहाँले यस विषयमा अख्तियार किनभने परमेश्वरले हामीलाई परिभाषित दिनु छ. यदि हामी जो थाहा छैन, हामी जीवन हामी बाँच्न गर्न चाहनुभएको थियो बाटो छैन बाँच्न सक्छ.
म एक लाख कुराहरू धर्मशास्त्र हाम्रो बारे भन्छन् बारेमा कुरा सक्थे, तर म मा तीन यसलाई विभाजित थियो. हामी यस सत्रको कुरा छौँ भनेर पहिलो हामी सुन्दर गरिन्छ छ, तर भङ्ग. त्यो यस सत्रको मुख्य बिन्दु हो: हामी सबै सुन्दर गरिन्छ, तर भङ्ग.
र म भजन हेर्न चाहनुहुन्छ 139 पहिलो. तपाईं आफ्नो बाइबल छ भने त्यहाँ गर्नुहोस्. गर्दा बारी म केही संक्षिप्त पृष्ठभूमि दिनेछौँ.
यो सारा भजन परमेश्वर सबै कुरा थाह कसरी छ र एकै समयमा जताततै छ. जब दाऊद तल उहाँले rises गर्दा र बस्छन उहाँलाई थाह छ. उहाँले त्यो भन्छन् अघि भन्न जा के थाह. अनि उहाँले नै समय मा जताततै छ. उहाँ स्वर्गमा छ, उहाँले पृथ्वीमा छ, उहाँले सबैतिर छ. दाऊदले कि परमेश्वरको प्रशंसा.
त्यसपछि पद मा शुरू 14 उहाँले सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रशंसा. अनि उहाँले हामीलाई एक सुराग हामी जो मा दिन्छ.
म भययोग्य र सुन्दर बनाएको छु किनभने म तपाईंको प्रशंसा; आफ्नो काम अद्भुत छन्, मलाई थाहा छ कि पूर्ण तरिकाले. मेरो फ्रेम तपाईंबाट लुकेको थिएन म गोप्य ठाउँमा गरिएको थियो जब. जब म पृथ्वीको गहिराइमा सँगै बुना थियो, आफ्नो आँखा मेरो unformed शरीर देखे. तिनीहरूलाई एक हुन आउनुअघि मेरो लागि नियुक्त सबै दिन आफ्नो पुस्तकमा लेखिएका थिए. (भजन 139:14-16, रूपान्तरित)
परमेश्वरले हामीलाई गरे. त्यो हाम्रो पहिचान को सुरूवात विन्दुमा छ, र हामी वास्तविकता प्रकाश बस्न गर्नुपर्छ.
हामी परमेश्वरले बनाइए
अब म यहाँ अधिकांश मानिसहरू मानेर छु आज राती बुझ्न छ कि परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता. हामी कुनै पनि आफूलाई सिर्जना. धेरै कुरा विपरीत, हामी संयोग वा संयोगले यहाँ हुनुहुन्न. त्यो हालसम्म-ल्याइएको र अविश्वसनीय छ. हामी जानाजानी परमेश्वरले सिर्जना. र छैन एक नगण्य कुरा हो. यो हाम्रो जीवनमा फरक पार्छ र हाम्रो पहिचान र आकारहरू.
तर म तपाईं परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएन कि एक पल को लागि कल्पना गर्न चाहनुहुन्छ. तपाईं अनियमित संयोगले यहाँ हुनुहुन्छ. तपाईंको अस्तित्व लागि कुनै पनि जानिजानि उद्देश्य छ. अब त्यो प्रश्नको जवाफ प्रयास, तिमी यहाँ के को लागी आएको? तिनीहरूले अनियमित दुर्घटना हुँदा हाम्रो जीवन सबै अर्थ र मूल्य गुमाउन. त्यो परिवार साँच्चै कुनै अर्थ छैन मतलब, हाम्रो नैतिकता व्यर्थ हो, मेरो कठिन समयमा कुनै उद्देश्य छ. यो दुनिया हेर्न एक राम्रो depressing तरिका हो. र भाग्यवस, यो सत्य हो. हाम्रो सृष्टिकर्ता उहाँको वचन हामीलाई आफूलाई देखाइएको छ.
जहाँ तपाईं देखि आउन छन् बारेमा धेरै भन्छन्. त्यसैले म एक अनौठो यन्त्र फेला पार्न र यदि म संग के गर्न बाहिर आंकडा गर्न सक्दैन, जो सोध्न सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति छ? यसलाई गरे जो व्यक्ति. तिनीहरूले मलाई बताउन सक्नुहुन्छ यो के हो र के यसको लागि छ. हामी हाम्रो सृष्टिकर्ता सुन्न चाहनुहुन्छ, जसले हामीलाई गरे.
पदमा 14, दाऊदले छ भन्छन् "डरको र सुन्दर गरे।" के मतलब?
यो डरको बनाइने के मतलब? यो परमेश्वरको बस हामी मिलेर फेंक थिएन अर्थ. यो उहाँको लागि महत्त्वपूर्ण थियो. उहाँले ठूलो सम्मान र श्रद्धा हामीलाई गरे. यो haphazard वा अनियमित थियो. तपाईंको नीलो आँखा उद्देश्य छन्, वा आफ्नो खैरो छाला, वा आफ्नो लामो खुट्टा. यो सबै उद्देश्य थियो.
म बीचमा स्कूलमा कला वर्ग मा रहेको सम्झना, र म गरे सबै भयानक थियो, तर उद्देश्य मा छैन. त्यहाँ मेरो आमा अझै पनि हाम्रो घरमा तखतालाई मा छ यो कचौरा छ. यो तपाईं कहिल्यै देख्न छौँ ugliest कुरा हो. यो म राम्रो गरिरहेको सक्षम छैन भनेर होइन. किनभने म यो बारेमा पर्याप्त ख्याल गरेन साँच्चै यो समय दिन यो छ. म अझै हतार र त म मेरो साथी संग कुरा गर्न सक्छ समाप्त गर्न चाहन्थे. परमेश्वरको अनियमित हामी मिलेर फेंक छैन. उहाँले महान् हेरविचार संग गरे. उहाँले ध्यान तपाईं तैयार. एक कुशल मूर्तिकार विचार, ध्यान दिएर आफ्नो कृति सुन्दर छ सम्म टाढा chiseling.
र दाऊदले "सुन्दर गरे।" थियो भन्छन् यो अर्थ उहाँले ठूलो काम गरे. हामी सुन्दर जीव हो. मानव जगतले अविश्वसनीय छन्.
उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, “आफ्नो काम अद्भुत छन्, म पूर्ण तरिकाले भनेर थाह छ।” उहाँले आफ्ना अचम्मका कामहरू लागि परमेश्वरको प्रशंसा. भगवान एउटा अचम्मको सृष्टिकर्ता. उहाँले अचम्मको कुरा पूरा. र हामी परमेश्वरको ती अचम्मका कामहरू हुन्. वास्तबमा, हामी ती सबै को सबै भन्दा सुन्दर हुनुहुन्छ.
तपाईं परमेश्वरले आफ्नो अद्भुत कामहरू लागि उहाँले योग्य महिमा दिने गरिएको छ भने मलाई आश्चर्य? मानव जगतले अविश्वसनीय छन्. डाक्टर अझै पनि मानव शरीर छ भन्ने जटिल प्रणाली बुझ्न प्रयास गर्दै. केही वर्ष पहिले म मेरो फोक्सो मा एक आंसू थियो र सास फेर्न सकेन. म एक अस्पतालमा ओछ्यानमा राख्नु, र डाक्टर मेरो शरीर पहिले नै यो हेरचाह थियो किनभने केहि गर्न छैन. केही दिनपछि म ठीक थियो. हामी अचम्मको हो. हामी भङ्ग गर्दै, तर अझै पनि अचम्मको.
पक्कै, मान्छे कुराहरू जनावर उल्लेख सक्छ गर्न सक्नुहुन्छ हामी सक्दैन, जनावर जस्तै कि तेज वा थप बल सक्छ. हामीले सृष्टिको सबैभन्दा सुन्दर भाग हुनुहुन्छ हामी कसरी थाह पाउँछौं?
हामी उहाँको स्वरूपमा सृष्टि हुनुहुन्छ! कुनै पशु, वा बोट, वा देशमा टुक्रा, वा ग्रह परमेश्वरको स्वरूपमा बनाएको छ. उहाँले हामीलाई उहाँलाई जस्तै हुन गरे! परमेश्वरले आफ्ना महिमा बन्द देखाउन सबै सिर्जना, र हामी सबै भन्दा स्पष्ट यसलाई बन्द देखाउन पाउने कि सृष्टिको भाग हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई जस्तै बनाइएको भाग हुनुहुन्छ किनभने.
अब त्यो सोच्न. त्यो जीवन आफ्नो मुख्य उद्देश्य हो: परमेश्वरको बन्द देखाउन. म मूर्तिहरू हामीलाई तुलना एक लेखक पढ्न. हामी सृष्टिमा परमेश्वरको मूर्तिहरू जस्तै हुनुहुन्छ. हामी परमेश्वरको हुनुहुन्छ, तर हामीले उहाँलाई जस्तै हुनुहुन्छ. हामी उसलाई प्रतिनिधित्व र हामी उहाँलाई एक कम तस्वीर देखाउन प्राप्त. म छवि मन.
कै त? हाम्रो संस्कृति निरन्तर तपाईं असंतोष हुन सिकाउने छ. तपाईंले यो आवश्यक. तपाईं राम्रो पर्याप्त हुनुहुन्न, पर्याप्त शौकीन, कलिलो पर्याप्त, पर्याप्त सुन्दर, पर्याप्त स्मार्ट, वा पुष्ट पर्याप्त. राम्रो तिमी सिद्ध हुनुहुन्न, तर तपाईं डरको र सुन्दर गरिन्छ.
म तपाईंलाई मा सन्तुष्टि पाउन चाहनुहुन्छ. यो मान्छे वा girls तपाईं आकर्षक हुनुहुन्छ लाग्छ सक्छ, तर तपाईं डरको र सुन्दर बनाएको हुनुहुन्छ के थाहा. तपाईं smartest नहुन सक्छ, तर तपाईं डरको र सुन्दर गरिन्छ. तपाईंको Jokes corny हुन सक्छ, तर तपाईं डरको र सुन्दर गरिन्छ. तपाईं एउटा सुन्दर छन्, अचम्मको, सार्वभौम परमेश्वरको अविश्वसनीय सिर्जना. र केही लिन टाढा सक्नुहुन्छ!
हामीलाई केही आफूप्रति पनि सानो लाग्छ. हामी केही हुनुहुन्छ लाग्छ. त्यो झूट हो. तपाईं डरको र सुन्दर गरिन्छ. छैन जो कोहि तपाईं अन्यथा बताउन गरौं गर्छन्. के परमेश्वरले सोच्छ धेरै तपाईं वा अरूलाई लाग्छ सक्छ के भन्दा बढी मामलाहरु.
हामीलाई केही आफूप्रति धेरै लाग्छ. Kanye पश्चिम बारेमा सोच्नुहोस्. उहाँले समस्या धेरै मा हुन्छ, तर कुरा उहाँले अरू सबैलाई पहिले नै सोच्छ कुराहरू भन्छन् छ. उहाँले भनिन्छ गीत छ "म परमेश्वर हुँ।" त्यसैले धेरै मान्छे यो अत्यधिक आफूलाई विचार. तर तपाईं बस एक प्राणी हो. परमेश्वरको एक्लै निर्माता छ.
यो पनि हामी अरूलाई हेर्न कसरी लागि निहितार्थ छ. कसैले मूल्यहीन छ. कसैले नगण्य छ. प्रत्येक व्यक्ति डरको र सुन्दर बनेको छ. जब तपाईं सडक त्यस बेघर मान्छे पारित, उहाँले एक कसैले होइन सम्झना. यस्तो कुनै कुरा एक कसैले रूपमा छ.
हामी परमेश्वरको चिन्नुहुन्छ
यहाँ जो कोहि babysit गर्छ? म एक जवान छोरा छ, र मेरी श्रीमती र म एक मिति मा जान चाहनुहुन्छ जब हामी एक Babysitter प्राप्त गर्न सक्छन् त अग्रिम तीन वर्ष जस्तै तालिका छ. तर हामी गएका गर्दा हाम्रो छोरा हेरचाह गर्न मान्छे भुक्तानी. Babysitters कि आफ्नो जिम्मामा छन् कुराहरू आफ्नो आँखा राख्न. खैर सृष्टिको सबै परमेश्वरको जिम्मामा छ. र उहाँले यो सबै उहाँको आँखा राख्छ, तपाईं सहित.
परमेश्वरको बस सबै सिर्जना र त्यसपछि गर्नुभयो यसलाई जान. परमेश्वरले गइरहेको छ कि सबै को intimately थाह छ.
“मेरो फ्रेम तपाईंबाट लुकेको थिएन म गोप्य ठाउँमा गरिएको थियो जब. जब म पृथ्वीको गहिराइमा सँगै बुना थियो, आफ्नो आँखा मेरो unformed शरीर देखे।” (भजन 139:15-16)
उहाँले गर्भमा थियो हुँदा पनि परमेश्वरले उहाँलाई देखे भन्दै गर्नुपर्छ. त्यो गर्भमा हुँदा पक्कै अरू कुनै एक उहाँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. तिनीहरू अझै उहाँको बारेमा धेरै थाहा छैन. तर परमेश्वरले उहाँलाई देख्नुहुन्छ, उहाँले एक बदाम को बस आकार थियो हुँदा पनि. परमेश्वरले उहाँलाई हेरचाह छ, उहाँलाई धान्ने, उहाँलाई सँगै बुनाई.
जब मेरी श्रीमती र म बाहिर फेला त्यो गर्भवती थियो, हामी डाक्टर अर्को सोमवार गए. र हामी पहिले देखि नै एक हार्टबिट सुन्न सक्छ. त्यो यति सानो थियो, तर परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम र उहाँलाई बनाउने थियो. परमेश्वरले आफ्नो सानो unformed शरीर देखे. त्यहाँ परमेश्वरको दृष्टिकोण पलायन कि केही छ.
परमेश्वरले तपाईंलाई बारेमा बिर्सनुभयो भने, तपाईंलाई थाहा हुनेछ. उहाँले हाम्रो मन पिटाई र फोक्सोमा साँस राख्छ.
हामी कुनै पनि अदृश्य छन्. परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ र गहिरो हाम्रो जीवनमा चासो. यो हाम्रो लागि एक सान्त्वना हुनुपर्छ. त्यहाँ हामी परमेश्वरको माध्यम जान केही छैन थाह छ. कुनै चुनौती वा चोट. परमेश्वरले तपाईंलाई चोट कुराहरू ख्याल गर्नुहुन्छ. तपाईं महत्त्व-you're पहिले नै महत्वपूर्ण लागि लड्न छैन.
आफ्नो मनपर्ने गायक टिभीमा आफ्नो नाम बाहिर भनिन्छ भने के, कि अचम्मको हुन छैन? यदि तपाईंलाई कहिल्यै आफ्नो हात मिलाउ मिल्यो, तिनीहरूले बस थाह छ कि तपाईं परेका पर्याप्त हुनेछ. परमेश्वरले कसरी धेरै अचम्मको हामी जो थाह छ कि. कि पर्याप्त हुँदैन?
“तिनीहरूलाई एक हुन आउनुअघि मेरो लागि नियुक्त सबै दिन आफ्नो पुस्तकमा लेखिएका थिए।” (भजन 139:16)
मलाई पागल चलाए कि मलाई कुराहरू सबै प्रकारका भन्न प्रयोग मेरो पिताजी. एउटा कुराको लागि, उहाँले खतरा केही दयालु मा म गरे हरेक कथन बारी थियो. तर उहाँले भन्न प्रयोग अर्को कुरा हो, “केटा, भन्दा तपाईं आफैलाई थाहा म राम्रो थाहा छ।” यो मलाई त पागल बनाउने. तर एक दिन मैले यो साँचो थियो बुझे. किन? किनभने मेरो सानो बच्चा मस्तिष्क कुराहरू पनि बुझ्न सकेन. तर मेरो पिताजी थाह.
हाम्रो बारे कुरा पनि हामी उहाँलाई हुनुहुन्न किनभने थाहा छैन कि परमेश्वरको थाह. हाम्रो सानो मानव दिमाग सबै बुझ्न सक्दैन.
उनी पनि जन्मनुभन्दा परमेश्वरको उहाँले के थियो सबै थाह थियो भन्छन्. परमेश्वर सबै कुरा नियन्त्रण र उहाँले सबै थाह. उहाँले आफ्नो टाउको मा हो कति hairs थाह. उहाँले तपाईंलाई सोच हुनुहुन्छ के अहिले थाह. उहाँले तपाईंलाई आज राती र भोलि के छौँ के थाह. परमेश्वरले मात्र पृथ्वीमा सबै सात अर्ब बारेमा धेरै थाहा सक्छ.
हामी बताउन हामी जो बाइबल हेर्न गर्नुपर्छ किन यो छ. परमेश्वरले हामीलाई गरे जो एक छ किनभने र उहाँले हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ. उहाँले हामीलाई भन्दा बढी हामीलाई थाह
यो प्रशंसनीय छ! उहाँले हामीलाई मन होइन. परमेश्वरको कुरा कहिल्यै फेला छ. त्यो गलत भएको कहिल्यै गर्नुपर्छ. उहाँले छक्क भएको कहिल्यै गर्नुपर्छ. उहाँले केहि मा हेर्न थियो कहिल्यै गर्नुपर्छ. उहाँले सबै तथ्य प्राप्त अघि निर्णय कहिल्यै बनाइएको. उहाँले सबै थाह!
तपाईं उहाँलाई भरोसा गर्न चाहनुहुन्छ यस बनाउन गर्दैन?
यो गर्नुपर्छ. तर म पहिले नै उल्लेख गर्नुभएको छ रूपमा, हामीलाई केही आफूप्रति पनि अत्यधिक लाग्छ. र हामी यस तेस्रो भाग भूल किनभने धेरै हदसम्म छ. हामी पनि भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ कि भूल.
हामी सुन्दर मात्र गरे गरिरहनु भएको छैन; हामी पनि भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ. बाइबल हामी उहाँको स्वरूपमा परमेश्वरले सिर्जना भन्छन्. हामी कुनै दोष नभएको र पूर्ण परमेश्वरको जोडिएको थिए. तर पाप संसारमा प्रवेश गर्दा, यो हामी सबै प्रभावित. अनि हामी सारा हुन प्रयोग गर्दा, अब हामी भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ. हाम्रो पतन एक सुन्दर क्रिस्टल मूर्तिकला गिरा भइरहेको जस्तै छ. यो टुक्रा मा छ. अब रोग त्यहाँ, मृत्यु, र सबै पाप को खराब.
म यो आईफोन छैन धेरै लामो पहिले पायो. यो राम्रो तरिकाले काम गर्दछ. तर म यो नयाँ पायो अघि मेरो आईफोन भयङ्कर थियो. म यो सबै समय गिरा, त्यसैले स्क्रिन टूट थियो. यो साँच्चै ढिलो भयो. यो सधैं मलाई दुर्घटनाग्रस्त. म अझै हुनत एउटा नयाँ मा पैसा खर्च गर्न चाहँदैनथे. हरेक अब र फेरि म मेरो फोन थियो कसरी भयानक बारेमा उजुरी पकड थियो. तर म सेल फोन हुन प्रयोग कसरी फिर्ता सम्झना चाहन्छु. म पायो पहिलो सेल फोन रंग स्क्रीन संग पहिलो व्यक्तिहरूलाई थियो. मलाई लाग्यो यो अद्भुत थियो.
तर मेरो भद्रगोल अप आईफोन एक लाख पटक म पायो कि पहिलो फोन भन्दा राम्रो थियो. म यो भद्रगोल हुन सक्छ महसुस हुनेछ, तर यो अझै पनि अचम्मको छ. यो ढिलो र टूट हुन सक्छ, तर तपाईं अझै पनि यसको amazingness झलक हेर्न. म अझै पनि यो राम्रो तस्वीर लिन सक्छ. म अझै पनि यो साथ इन्टरनेटमा प्राप्त गर्न सक्छन्. म अझै पनि यसलाई सामान डाउनलोड गर्न सक्छन्. म यसलाई मा अनुप्रयोगहरू र खेलहरू. स्याउ भनेर फोन मा एउटा अचम्मको काम गरे. त्यो फोन अद्भुत थियो, तर भङ्ग.
त्यसैगरि, परमेश्वरले हामीलाई एउटा अचम्मको काम गरे, तर हामी भङ्ग गर्दै. तपाईं हामीलाई हेर्न भने, तपाईं अझै पनि हामी अद्भुत प्राणीहरू हुनुहुन्छ बताउन सक्नुहुन्छ, तर यो हामी भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि स्पष्ट छ. हामी सधैंभरि छैन. हामी बिरामी पर्छन् र मर्छन्. हामी हाम्रो गोलीगाँठो चोट. हामी सधैं परीक्षण को लागि सामान सम्झना छैन. हामी अरूले चोट प्राप्त. र हामी परमेश्वरको विरुद्धमा पाप.
के तपाईं कहिल्यै तपाईं भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविकता बारे लाग्छ? हामी सबैभन्दा हामी ठीक छौं मानेर हाम्रो जीवनलाई मार्फत जाने. किनभने हामी हाम्रो वरपर अरू कसैलाई भन्दा कुनै पनि फरक देखिन्छ छैन हामी झुक्काएका प्राप्त. तर सत्य छ, हामी सबै भङ्ग छन्. म हामी भङ्ग गर्दै दुई प्राथमिक तरिका हेर्न चाहनुहुन्छ.
पहिलो, हामी शारीरिक भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ. हामी जवान हुँदा हामी ठीक गरिरहनुभएको छ कि छाप बाँच्न. अनि हामी किनकी हामी अझै हाम्रो brokenness को कुनै पनि संकेत देख्न भनेर मान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ. शायद सानो संकेत, तर हामी तिनीहरूलाई बेवास्ता. यो मेरो पत्नी हाम्रो फोर्ड एक्सप्लोरर ड्राइभिङ थियो जस्तै छ. यो हल्ला गर्न थाले, तर त्यो अझै यो ड्राइभिङ राखिएको. केही हप्तापछि हामी चेसापिके खाडी फिर्ता ड्राइभिङ थिए र पाङ्ग्रा लगभग बन्द भङ्ग. यसको सट्टा संकेत बेवास्ता को, हामी तिनीहरूलाई सावधान हुनुपर्छ.
हाम्रो पतित संसारको intimately सजग गरिएको थियो जसले बाइबल मा एक व्यक्ति अय्यूब थियो. सबै उहाँबाट लगियो. आफ्नो अवस्था बारे एक विलाप को बीचमा उहाँले सबै मानिसजातिको राज्य मा झल्काउँछ. यहाँ उहाँले के भन्छ छ:
“एक महिला को जन्म भएको छ मानिस दिन को केहि र समस्या भरिएको छ. उहाँले एक फूल र withers जस्तै बाहिर आउँछ; उहाँले एक छाया जस्तै भाग्छन् र जारी छ।” (काम 14:1-2)
काम हाम्रो दिन असीमित छैन भन्दै छ. हामी बाँच्न वर्ष को असीमित संख्या छैन. हामी सबै केही दिन मर्नेछन्. हामी एक फूल जस्तै सुन्दर बाहिर आउन सक्छ, तर हामी सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो हुनेछ. उहाँले withering हामीलाई वार्ता गर्दा, उहाँले हाम्रो शरीर बिस्तारै हामीलाई बन्द अर्थ. हाम्रो सौन्दर्य बिलाएर र deteriorate हुनेछ. तिनीहरू सधैं साथै तिनीहरूले अब के रूपमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. र अन्ततः हामी मर्नेछन्. अनि जब उहाँले हामीलाई छाया गर्न तुलना, उहाँले यो जीवन स्थायी छैन भन्ने सञ्चार गर्नुपर्छ. यो अन्त आउँछ.
म आज एक टाइम पत्रिकाले लेख पढ्न हकदार: "गुगल समाधान गर्न सक्दैन मृत्यु?"लेख को महत्वाकांक्षी कम्पनी बारेमा कुरा र यो कसरी चन्द्र लागि गोली रुचि. त्यहाँ मृत्युको समस्या समाधान गर्न सक्ने विज्ञान र प्रविधिको कुनै रकम छ. यस्तो हुन्छ. मृत्यु गुगल समाधान गर्न सक्दैन एक वास्तविकता छ.
त्यसैले हो, हामी सुन्दर गरिन्छ. हामीले सृष्टिको सबैभन्दा अचम्मको भाग हुनुहुन्छ, तर कहिल्यै पतन देखि हामी पनि भङ्ग गर्दै.
हाम्रो brokenness हामी परमेश्वरको हुनुहुन्न भनी हामीलाई सम्झाउँछ. हामी अब त राम्रो काम हाम्रो युवा शरीर हामी सधैंभरि हुनेछ के हो भनेर मान हुँदैन. परमेश्वरको सेवा गर्न पछि सम्म पर्खन यो हाम्रो लागि राम्रो कारण छ.
त्यसैले हामी भङ्ग हुनुहुन्छ पहिलो तरिका शारीरिक छ. तर हामी पनि आध्यात्मिक तवरमा भङ्ग गर्दै.
"कुनै पनि धार्मिक छ, कुनै, एक होइन; कुनै एक बुझ्नुहुन्छ; कुनै एक परमेश्वरको लागि खोज्ने. सबै फर्काए छ; सँगै तिनीहरूले व्यर्थका भएका छन्; कुनै एक राम्रो गर्छ, छैन पनि एक. आफ्नो घाँटी खुला गम्भीर छ; तिनीहरूले धोका आफ्नो भाषामा प्रयोग. asps को venom आफ्नो ओठ अन्तर्गत छ. आफ्नो मुख curses र तीता भरिएको छ. तिनीहरूका खुट्टाहरू रगत बगाउन छिटा छन्; आफ्नो बाटोमा नष्ट र दुःखले छन्, र शान्तिको बाटो तिनीहरूले ज्ञात छैन. तिनीहरूको आँखामा परमेश्वरको डर छैन। " (रोमी 3:11-18)
यस खण्डमा जहाँ पावलले बन्द सबैलाई परमेश्वरको विरुद्धमा पाप छ कसरी कुरा सुरु रोमीको पुस्तकमा छ. र यहाँ, यहाँ मूलतः यहूदीहरूले बताउन गर्नुपर्छ, हो पनि तपाईं. हामी सबै.
“निश्चय पनि त्यहाँ पृथ्वीमा राम्रो र कहिल्यै पाप गर्छ जो एक धार्मिक मान्छे हो।” (उपदेशक 7:20)
अब हामी सामान्यतया लाग्छ हामी असल मानिसहरू हुनुहुन्छ कारण हामी यसलाई मापन मानक छ: एक अर्का. अन्य मानिसहरूलाई तुलना पाठ्यक्रम त्यसैले म एक असल व्यक्ति हुँ. म मान्छे मार्न छैन. म एक आतंककारी छैन. त्यसैले, म एक असल व्यक्ति हुँ, ठिक? बाइबल अनुसार छैन. मानव दृष्टिकोणबाट, पक्का राम्रो व्यक्ति हुन सक्छ. तर के हामी साँच्चै इच्छुक हुनुपर्छ परमेश्वरको दृष्टिकोण छ.
अनि हामी मार्फत जाने रूपमा, हामी साँच्चै उसलाई तर्क गर्न सक्दैन. यो सबै साँचो छ.
र उहाँले हामीलाई हरेक भाग माथि-समझ भद्रगोल छ कि मामला बनाउन कि नोटिस, घाँटी, अन्य भाषाहरू, ओठको, मुख, खुट्टा, आँखा-सबै हामी! हामी जो खराब कहिलेकाहीं के राम्रो मान्छे हुनुहुन्न. हामी अक्सर पाप गर्ने पापी मानिसहरूलाई हुनुहुन्छ. हामी बिरामी हृदय छ.
हामी अक्सर हामी यो सत्य बुझ्न भन्न छौँ, तर यो हामी हाम्रो जीवन बिताउन बाटो देखाउनका छैन. हामीले भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ थाहा भन्न, तर हामी एक स्थिति मा सही छैन हुनुहुन्छ स्वीकार गर्न अनिच्छुक हुनुहुन्छ. जब कसैले हामीलाई accuses, हाम्रो पहिलो प्रतिक्रिया, बरु आत्म-परीक्षण को, आफूलाई रक्षा गर्न सधैं छ. शायद हामीले तर्क, या शायद हामी तिनीहरूलाई सट्टा दोष. हामी बुझ्न भने हामी भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि शायद हामीले आफूलाई पहिलो जाँच्न गर्नुपर्छ. तपाईं त्रुटिपूर्ण छौं, जो तपाईं गलत हुन सक्छ अर्थ.
वा बारेमा यो-हामीले अन्य मानिसहरूलाई आफ्नो पाप मा हेर्न कसरी. यदि हामी प्रत्येकले भङ्ग छैन र नै मुक्तिदाता खाँचो. कसैले तिनीहरूले तपाईंलाई भन्दा राम्रो हुनुहुन्छ भन्न सक्छौं, र तपाईँले भन्दा राम्रो हुनुहुन्छ भन्न सक्दैन. तिनीहरूले तपाईं भन्दा पनि बदतर पाप सक्छ, तर हामी एउटा सिद्ध उद्धारकर्ता खाँचो सबै भाँचिएको पापी हुनुहुन्छ. झन् खत्तम, हामी स्वर्ग प्राप्त गर्न आफूलाई निर्भर.
हामी एक हृदय हालत छ र सबै कुरा आउँछ जहाँ हृदय. त्यसैले यो लगभग poisoned हुन्छ कि पानी एक pitcher जस्तै छ. तपाईं यसलाई खन्याउन हरेक ग्लास poisoned हुनेछ. विभिन्न चश्मा आफ्नो विचार हो भनेर कल्पना, कार्यहरू, इच्छा, र निर्णय. यो सबै प्रदूषित छ.
हामी त हामी यसलाई एक ठूलो सम्झौता हो लाग्छ छैन भनेर पाप गर्न प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो छ. पाप परमेश्वरको हामीलाई राख्छ कि कुरा हो. पाप अनन्त जीवन हामीलाई राख्न भन्ने कुरा हो. हामी डरलाग्दो मान्छे लाग्छ सक्छ वा खराब अवस्थामा हाम्रो सबैभन्दा खराब शत्रु हो. हामीलाई सबैभन्दा क्षति गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो वास्तविक खराब शत्रु हाम्रो आफ्नै पाप हो. अन्य कुराहरू हामीलाई सिजन लागि हानि गर्न सक्छ, तर हाम्रो पापको हामी सधैंभरि सजाय हुन सक्छ. यसले हामीलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ पाप हो.
हामीलाई केही हामी गम्भीर अपराध प्रतिबद्ध कहिल्यै गर्नुभएको लाग्छ. तर ब्रह्माण्डको सबै खराब अपराध परमेश्वरको विरुद्धमा पाप हो. उहाँले एक प्रहरी अधिकारी अख्तियार भन्दा धेरै उच्च छ, वा अध्यक्ष. उहाँले परमेश्वरको! र पनि हामी हत्या छैन, हामी झूट गर्नुभएको भन्ने तथ्यलाई अझै पनि परमेश्वरको विरुद्धमा एक heinous अपराध हो.
हामी एक भाँचिएको दर्पण जस्तै हुनुहुन्छ. हामी परमेश्वरको स्वरूपमा प्रतिबिम्बित, तर हामीले गर्नुपर्छ रुचि छैन. त्यो हामी के गर्न गरियो के. बरु हामी एक कुरूप विकृत चित्र देखाउन. प्रेम कामवासना गर्न उत्तेजित गर्दछ. प्रदान गर्ने इच्छा लोभ गर्न उत्तेजित गर्दछ. प्रतिबद्धता मूर्तिपूजा मा उत्तेजित गर्दछ. यो सबै पाप हो, र परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ.
हामी खाँचोमा परेका हुन्
त्यो नराम्रो समाचार छ. सुसमाचार के?
हामी विचार राम्रो मान्छे मात्र स्वर्ग जाने, र यो एक अर्थमा साँचो हो. तर हामी कुनै पनि राम्रो हो. त्यसैले हामी अरू कसैले हामीलाई आफ्नो भलाइ दिन आवश्यक. त्यो व्यक्ति येशूको छ.
यो हाम्रो आशा हाम्रो शारीरिक वा आध्यात्मिक स्वयं मा राख्न सक्नुहुन्छ मतलब. तिनीहरूले भाँचिएको हुनुहुन्छ र हामीलाई तल दिनु हुनेछ. हामी एकदम राम्रो हुनुहुन्न. हामी सँगै हामीलाई फिर्ता राख्न येशूले आवश्यक.
हामीले आध्यात्मिक भङ्ग थिए वा शारीरिक भङ्ग भने, शायद यो एक सम्झौता को भनेर ठूलो जस्तै जस्तो थियो. बस शारीरिक, हामी राम्रो छौं मरेपछि किनभने यो ठीक छ. वा आध्यात्मिक, हामी किनकी हामी कहिल्यै मर्ने छौँ परमेश्वरको सामना कहिल्यै पनि. तर या त बाटो हामी हाम्रो पाप संग अप्रसन्न तुल्याएको छ जसले पवित्र परमेश्वरको सामु खडा छौँ.
के तपाईं खाँचोमा परेका छौं थाह छ? खैर सुसमाचार तपाईं सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने छ. हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पूरा गर्ने मुक्तिदाता त्यहाँ.
"मुक्ति मा अरू कुनै एक पाइन्छ, लागि जो हामी सुरक्षित हुनुपर्छ मानिसजातिको दिइएको स्वर्गमा अन्तर्गत कुनै अन्य नाम छ। " (प्रेरित 4:12)
येशूले के भङ्ग छ पुनर्स्थापना गर्न सक्ने मात्र छ. उहाँले परमेश्वरको हामीलाई मिलन हुनु सक्ने मात्र एक छ. उहाँले हाम्रो मात्र आशा छ. किनभने उहाँले हाम्रो विद्रोह लागि मृत्यु. उहाँले चिहानबाट उठेर. हामी एक बिल अप racked गर्नुभएको. येशूले यो सबै भुक्तानी.
पुनरावलोकनमा त: तपाईं को हो?
उहाँले हामीलाई किनकी हाम्रो बारे परमेश्वरको ख्याल राख्नुहुन्छ. उहाँले आफ्ना सृष्टिको मुकुट हामीलाई मान्यता तल देखिन्छ र अझै पनि. तर हामी भयानक बिग्रिएका छन् भन्ने देख्नुहुन्छ. हामी एक मुक्तिदाता को आवश्यकता हुनुहुन्छ.
तपाईं के तपाईं चर्च जानुभएको छ किनभने मसीही यहाँ आज हुनुहुन्छ मान हुँदैन. तपाईं साँच्चै तपाईं भङ्ग गर्दै छन् स्वीकार गर्नुभएको छ भने, तपाईं परमेश्वरको आहत गर्नुभएको, तपाईं एक मुक्तिदाता चाहिन्छ भनेर. यदि तपाईं हुनुहुन्छ पापबाट खोल्दै छैन. तपाईं ख्रीष्टमा भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं परमेश्वरको एक बच्चा हुनुहुन्छ.
अर्को सत्रमा, हामी परमेश्वरले आफ्नो परिवारमा हामीलाई adopts कसरी कुरा छौँ. गरेको प्रार्थना गरौं.
1. परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवन परिवर्तन गरे भन्ने तथ्यलाई कसरी? यो के फरक यो हप्ता गर्नेछ?
2. परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुहुन्छ भनेर थाह पाउँदा यो कसरी आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्छ? परमेश्वरले हामीलाई intimately थाह छ कि यो के फरक पार्छ?
3. यसलाई कसरी तपाईं एक दिन मर्न जाँदै हुनुहुन्छ थाहा महसुस गर्छ?
4. हाम्रो जीवनमा हाम्रो आध्यात्मिक brokenness कसरी देखाउँछ?
5. तथ्यलाई हामी कुनै पनि मतलब राम्रो हो भनेर हामी बस यसलाई स्वीकार र त्यो बाटो बाँच्न गर्छ?
6. यो साँच्चै पापको पश्चात्ताप गर्न अर्थ र येशूमा विश्वास गर्छ के?
माइकल खानको • मार्च 4, 2014 मा 9:46 बजे • जवाफ
के समझ र शिक्षण एक उत्कृष्ट टुक्रा. प्रचुर मात्रामा यो आशिष्
एलन • मार्च 5, 2014 मा 3:36 बजे • जवाफ
यो धेरै थियो परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष good.May.
Glore • मार्च 6, 2014 मा 11:23 छु • जवाफ
प्रेम ब्रो. म पनि क्षेत्रमा आफ्नो संगीत लागि जानिन्छ र प्रतिभाशाली गर्नुभएको. ठूलो प्रवचन. अर्को लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन.
सुलेमान राजा • मार्च 12, 2014 मा 6:27 बजे • जवाफ
म अनमोल महसुस, म भाग्यमानी छु!
अन्तिम भाग लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन.
परमेश्वरको आशिष, यात्रा.
MichaelSmith • मार्च 14, 2014 मा 12:34 बजे • जवाफ
यात्रा, सुन्न यस्तो ठोस संगीत भइरहेको लागि धन्यवाद, र यी शिक्षाहरू लागि धन्यवाद. तिनीहरूले शिक्षा र प्रोत्साहन लागि सुन्न ठूलो भएको, म परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष जारी कि प्रार्थना, र एक दिन म व्यक्ति एक शिक्षण अनुभव प्राप्त.
Payne • मार्च 19, 2014 मा 7:06 छु • जवाफ
धेरै राम्रो! जब अर्को हुनेछ2भिडियो जारी हुन?
जुआन • मार्च 19, 2014 मा 10:49 बजे • जवाफ
ठूलो सन्देश यात्रा ली प्रेम तपाईं सँगै यो सबै राख्नु बाटो हरेक छोएर यो म सुन्दर बनाएको परमेश्वरको प्रचुर मात्रामा तपाईं र परिवार आशीर्वाद May छु भनेर थाहा ठूलो छ
एरियल • मार्च 25, 2014 मा 7:39 बजे • जवाफ
यो यस्तो ठूलो प्रवचन छ. साँच्चै मलाई आफैलाई मार्ग सोचाइ साँच्चै गलत छ भनेर बुझे मदत. परमेश्वर साँच्चै प्रयोग!
क्रिश्चियन पनि • अप्रिल 23, 2014 मा 1:16 छु • जवाफ
लियो • डिसेम्बर 11, 2015 मा 10:43 बजे • जवाफ
धेरै राम्रो, preachings र जवानहरूले आवश्यक!